Amalungelo awodwa abenzi be-Apple ityala elitsha le-AirPod onokulithanda | Ndisuka mac
Siphela iveki njengazo zonke iiCawe ngokudityaniswa okuvela namhlanje esandleni soogxa bethu uJordi Giménez. Nangona kunjalo, zininzi izinto esingakuxelela ngazo kwaye enye yazo yile U-Apple unelungelo elilodwa lomenzi wechiza elitsha kwii-AirPods ezilayishwe ziindaba.
Ewe ityala elitsha kwii-headphone ekungekho mntu sele ekwazile ukuzithenga ngenxa yeengxaki zesitokhwe esasokola kwi-Apple, ayisaziwa nokuba kungenxa yokunqongophala kwamacandelo okanye njengesicwangciso sentengiso. Ndinazo ukusukela ngoDisemba kwaye ndingakuxelela ukuba ezi ntloko zitshintshe ifilosofi yam xa ndimamele umculo kwaye ngoku ndiyawuthanda yehla esitratweni usebenzisa zona njengoko zingenazintambo kwaye zinesandi, kum, zilunge kakhulu.
Ewe, ilungelo lomenzi esifuna ukuthetha ngalo linxulumene nelinye lamacandelo e- ii-AirPods kwaye le yimeko yayo yesikhongozeli. Ukuba wenze uphando oluncinci malunga nale mveliso uya kwazi ukuba ii-AirPods zineebhetri zangaphakathi kwintloko nganye kodwa ezi zigcinwe kwimeko yesikhongozeli ngaxeshanye ibhetri eya kukuvumela ukuba ubuyele kuyo Biza ii-AirPod zakho ngokuphindaphindiweyo ngaphandle kokufuna iplagi yayo, ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24 zokuyisebenzisa.
Ilungelo elilodwa lomenzi lokuba iApple ibhalise iintetho malunga necala elitsha lee-AirPods eziya kuhamba kancinci kwaye zibandakanye netekhnoloji yokutshaja induction, eya kukuvumela ukuba uvuselele iApple Watch yakho ngecala elifanayo neAirPods. Kodwa umbono awupheleli apho kwaye ikwathetha malunga nokuba ngale meko sinokuphinda sihlaziye i-iPhone okanye iMacBook ngetekhnoloji yoqheliso. Ndicinga ukuba kunqabile kakhulu ukuba ngebhetri encinci Ungayitshaja kwakhona iMacBook, kodwa kwiApple Watch okanye kwi-iPhone loo nto inokwenzeka.
Nokuba kunjani, iApple sele isebenza nohlobo olutsha lwee-AirPod ezinokuvela kwisikhumbuzo seminyaka eli-XNUMX ye-iPhone kunye nophuculo Phakathi kwayo esinokubandakanya ukunganyangeki kwamanzi kuzo zombini ii-headphone kunye netyala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Amalungelo awodwa abenzi be-Apple ityala elitsha le-AirPod onokulithanda
Enye imveliso engasokuze ikhutshwe
Intengiso. Akukho nkampani isisidenge ngokwaneleyo ukuba ibonise into ngaphambi kokuba iye kufika kwintengiso. Ke sukuthengisa umsi